Echefukwala discuss University of Bayreuth
Mmadụ Bịa ka University of Bayreuth. -Eche echiche ma na-arụ ọrụ mba na-achọ ihe karịrị nanị ịbụ otu n'ime ihe ndị kasị mma mahadum Bavaria na bi n'elu ọnọdụ ke mba ezi ihe ma na research rankings. N'ihi nke a, anyị emewo ndị development zaa maka afọ 2020 iji nwetakwuo nkọ nke University of Bayreuth pụrụ iche profaịlụ na keisompi ihu:
Ekele ya iche iche n'usoro nke ọzụzụ ma na putara ighe họọrọ elekwasị anya ebe, na University of Bayreuth na-mba ghọtara maka nnyocha onyinye na-enye ihe ndị magburu onwe ọmụmụ gburugburu ebe obibi.
The University of Bayreuth bụ otu n'ime ndị na-eduga aga Germany na okwu nke ya ọmụmụ gburugburu ebe obibi na na ọkwa nke ya ụmụ akwụkwọ.
The University of Bayreuth bụ a na-ajụ-sized campus mahadum nke a na-agba mbọ ka ndị kasị elu agụmakwụkwọ ụkpụrụ na nke mere nnọọ mgbalị siri ike ịtọ onwe ya iche n'ebe ibu mahadum.
Dị ka otu n'ime Germany ntà mahadum, anyị na-enwe ike rụọ ọrụ na ihe ebinyeghị akụkụ ọ bụla, onwe-obi ike mmụọ nke agụmakwụkwọ nnwere onwe, na nkà mmụta sayensị na-enwe ọganihu, na-elekọta mmadụ ọrụ. In line with our vision, anyị n'elu-ebute ụzọ ná onye na-elekọta, ịnọgide na-enwe elu agụmakwụkwọ ụkpụrụ, and creating programmes of study that take current research into account. Our interdisciplinary focus and the innovative collaboration between many of our disciplines are key features of Bayreuth’s research culture.
na retrospect, ọ bụ ugbu a n'ụzọ doro anya otú akọ na ọ bụ azụ na 1975 ka a mahadum dabeere na ijikọta ike n'okpuru ebe interdisciplinary nnyocha na izi. The ajụjụ chere ihu anyị globalized mmadụ na-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ mgbagwoju. Azịza ndị ziri ezi nwere ike na-hụrụ site nso, cross-inye nkwado - onye nke University bụ isi akụ. The University of Bayreuth e ji agụmakwụkwọ nnwere onwe, na nkà mmụta sayensị na-enwe ọganihu, na ihe mkpa, niile nke na-aghọta na onodu nke onodu n'obodo na omenala ọrụ.
Mmadụ Bịa ka anyị otu-nke-a-ụdị campus.
Ọ bụ ma obi onye-University na ihe mkpali. Ọ bụ ebe ndị enyi na-mere, mmekota na-butere, na echiche na-tụụrụ ime, n'ịhụ na anyị mahadum na-anọgide a bikon nke ọhụrụ. Scientific mgbanwe uru tremendously site na iche iche nke ọzụzụ anyị nkwurịta okwu campus-eweta ọnụ. Nke ahụ bụ eleghị anya ihe mere University of Bayreuth kemgbe-enwe ike usọrọ na ọtụtụ awards na ukpono n'ihi na ya ọkà mmụta rụzuru.
The ụwa bụ a obodo
... Na Bayreuth centrally odude. Na a bi nke gburugburu 73,000, Bayreuth bụghị karịsịa nnukwu, ma nke ahụ bụ otu n'ime ihe nke na-eme ya otú adọrọ adọrọ. Ndị mmadụ na-agba ọsọ n'ime ibe. Obodo nwere ike ịbụ ụwa na-ama maka ya kwa afọ opera usọrọ, ma ọ na-awade ụmụ akwụkwọ na-eme nnyocha a akụ na ụba nke omenala na nkà nkiri, Wagner wezuga onwe-. Ọ ga-abịa dị ka ọ na anya na obodo ahụ party na ụlọ mmanya Mpaghara bụ ike na-aka nke ụmụ akwụkwọ. Ma ị ga-anya otú ngwa ngwa ị na-enwe ike ịchọta ụzọ gburugburu dị ka ị na-achọpụta na ókè n'etiti campus na etiti obodo-aghọ na na na naa anya. Nke a pụrụ nnọọ ịbụ n'ihi na mgbe ọ bụ obere oge e nwere a maara ihu na n'akụkụ ọ bụla.
Location bụ ihe niile.
Sinik ugwu Bavaria, nri na Bayreuth si n'ọnụ ụzọ, dị ukwuu maka egwuregwu omume: ịgba ígwè, hiking, ugwu-rịa, ịkwọ ụgbọ mmiri, rafting, na eme ski niile magburu onwe ụzọ iji eme ka ị oge ntụrụndụ. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-eme na-achọsi ahụ obi na-adị nke a ibu obodo ugbu a, mgbe, Nuremburg bụ naanị otu awa ụgbọ okporo ígwè n'ebe na Munich bụ naanị 2 ½ awa. I nwere ike iru Berlin na 4 awa site ụgbọ ala, Leipzig na ọkara ahụ. Echefula: ịbụ na obi nke Europe pụtara Prague bụkwa naanị a atọ-hour ịchụpụ.
iwu, Business na Economics
Ị chọrọ discuss University of Bayreuth ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: University of Bayreuth ukara Facebook
Charité – Medical University nke Berlin Berlin